အိမ်ရောင်းဖို့အတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ကြည့်ကောင်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ - Home Decoration | iMyanmarHouse.com
5 May 2019 2:28 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
968 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
အခုအခါမှာတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေက ခေတ်စားလာတဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့သင်လိုအပ်တာမှန်သမျှ ကို onlineပေါ်ကနေ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ကသင့်အိမ်ရောင်းထွက်ဖို့အတွက် online မှာတင်ပြီး ကြော်ငြာမယ်ဆိုရင် သင်ရောင်းမယ့်အိမ်ပုံစံကိုအရင်ဆုံးမြင်မှာကတော့ အိမ်ပွဲစားတွေဖြစ်ပြီး တင်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေက စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပဲ ပွဲစားတွေကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဝယ်သူတွေနဲ့တွေ့ ဆုံဖို့လွဲချော်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိမ်ရောင်းဖို့အတွက် Online မှာဓါတ်ပုံတင်တဲ့အခါ သင့်အိမ်ရဲ့အပြင်အဆင် က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖို့နဲ့ ပွဲစားတွေ၊ ဝယ်သူတွေကို ဖမ်းစားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုပြောပြပေး မယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်မယ့်နေ့မတိုင်ခင် ပြင်ဆင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် သင့်အိမ်ရောင်းထွက်ဖို့အတွက် အကူအညီကောင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
အိမ်ကိုဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အစီအစဉ်စဆွဲတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့အိမ်ခြံမြေအေးဂျင့်က အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ တကယ်ပဲပေးနိုင်ရဲ့လားဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထွက်လာနိုင်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့်အေးဂျင့်တွေကိုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ အခုပြောပြပေးမယ့် မေးခွန်းအနည်းငယ်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးမယ့်အေးဂျင့်ကို မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
(၁) အေးဂျင့် မှာ ကျွမ်းကျင်ဓါတ်ပုံဆရာရှိရဲ့လား?
(၂) သင်ကိုယ်တိုင်ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပစ္စည်းကိရိယာတွေသုံးမလဲ။ ဒေါက်တိုင်တွေပါတဲ့ ပရော်ဖက် ရှင်နယ်ကင်မရာလား ဒါမှမဟုတ် ဆဲလ်ဖုန်းလား?
(၃) လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင်အေးဂျင့် ဒါမှမဟုတ် ဓါတ်ပုံဆရာက ပိုမိုအလင်းအားကောင်းစေတဲ့ Lighting လိုအ ရာတွေ ယူလာနိုင်မလား?
(၄) ပုံမှန်အားဖြင့်ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ထားပေးလဲ?
(၅) ဓါတ်ပုံထဲမှာ အိမ်ပုံစံကကြည့်ကောင်းစေဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
(၂) ပြတင်းပေါက်တွေကိုသန့်ရှင်းပြီး Shadeတွေကိုဖွင့်ထားပါ။
သင့်အိမ်ကိုဓါတ်ပုံထဲမှာတောက်ပနေအောင် ပြုလုပ်တဲ့အခါ လုံလောက်တဲ့အလင်းရောင်ကအချိန်အ ကြာကြီးရှိနေသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပြတင်းပေါက်တွေကိုသန့်ရှင်းပြီး Shade တွေကိုဖွင့်ထားပါ။
(၃) ပိုကြည့်ကောင်းစေဖို့ အိမ်တွင်းမှာ အပင်ထားရှိပါ။
သင့်အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ အစိမ်းရောင်အပင်လေးထားရှိလိုက်တာက အားအင်အ ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ခံစားရစေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အပင်ရဲ့မကောင်းတော့တဲ့အရွက်တစ်ချို့ကို ကပ်ကြေး ဒါမှမ ဟုတ် ချွန်ထက်တဲ့အရာတစ်ခုခုသုံးပြီး ရှင်းထုတ်လိုက်ပါ။ ကြီးမားတဲ့အရွက်တွေကိုတော့ နှူးညံ့တဲ့အဝတ်လေးနဲ့ သုတ်ပေးပါ။
(၄) ကောင်တာပေါ်မှ ပစ္စည်းတွေရှင်းလင်းထားပါ။
ရှုပ်ပွမနေတဲ့ကောင်တာက သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ကို ပိုပြီးကျယ်ဝန်းတယ်လို့ မြင်စေမှာပါ။ မလိုအပ်တာတွေ အကုန်လုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးရင်တော့ ကောင်တာကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားလိုက်ပါ။ ပေါင်မုန့်မီးကင်စက် နဲ့ ကော်ဖီ ဖျော်စက်လိုမျိုး သေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခု၊နှစ်ခုလောက်ဖယ်ရှားလိုက်တာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပိုအနေနဲ့ ရှိနေတာကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ ဒီလိုပစ္စည်းအသေးစားလေးတွေက တခါတရံမှာ သင့်အတွက်ကောင်း မွန်တဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(၅) ကြမ်းပြင်တွေကို ပြောင်လက်နေအောင်သန့်စင်ပါ။
သစ်သားကြမ်းပြင်တွေက သင့်အိမ်ရောင်းထွက်ဖို့ အဓိကပွိုင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး သင့်ရဲ့ကြမ်းပြင်ကို ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုနဲ့ တိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင် သစ်သား ကြမ်းခင်းလေးက ဓါတ်ပုံထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေစေမှာပါ။ အဲ့နည်းအတိုင်းပဲ stainless Steel တွေကိုပြုလုပ် မယ်ဆိုရင် ကြမ်းပြင်ကတလက်လက်တောက်ပနေမှာ သေချာပါတယ်။
ရေနှူးနေတဲ့ဆပ်ပြာကို စင်ပေါ်ကနေဖယ်ရှားပါ။ ရေချိုးခန်းနဲ့ သန့်စင်ခန်းသုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ များပြား လှတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ရေချိုးခန်းနဲ့သန့်စင်ခန်းထဲမှာ အကုန်သိုလှောင်ထားဖို့ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ရေချိုးခန်းလိုက်ကာတွေကိုဆွဲဖွင့်ထားတာ၊ မှန်တွေကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တာတွေအပြင် အိမ်သာကမုတ်ကိုပိတ်ထားပါ။ ပြီး ရင်တော့ ရေချိုးခန်းကိုအလင်းရောင်ရရှိအောင်ပြုလုပ်ထားပါ။ နောက်ပြီး နှူးညံ့တဲ့အဖြူရောင်သဘက်တစ်ထည်သင့်မှာရှိတယ်ဆိုရင် အသုံးပြုထားတာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ သဘက်အ ဟောင်း ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။. ဒီလိုဝယ်ယူထားတဲ့ သဘက် အသစ်တစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ နဂိုအဝတ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီး ထားထားလိုက်ပါ။
ဓါတ်ပုံရိုက်မယ့်နေ့မှာ သင့်အိမ်ကသဘာဝအလင်းရောင်နည်းနေရင် လိုအပ်တဲ့ အလင်းပမာဏကို ဓါတ်ပုံဆရာက studio Lighting သုံးပြီးရိုက်ကူးပေးလိမ့်မယ်လို့ တစ်ထစ်ချမယူဆထားပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဓါတ်ပုံဆရာအနေနဲ့ တစ်ခုခုကြောင့်မေ့နေတာမျိုးတွေရှိနိုင်တတ်ပြီး သင့်အိမ်ကမီးခလုတ်တွေကို ရှာမတွေ့နိုင် တာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဓါတ်ပုံမရိုက်ခင် အချိန်ခဏယူပြီး အလင်းရောင်ရနိုင်မယ့် မီးသီး၊ မီးအိမ် စတာတွေကိုဖွင့်ထားပြီး အပြင်ကအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရအောင်လို့ လိုက်ကာနဲ့ Shade စတာ တွေကိုဖွင့်ထားမထားဆိုတာ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်စစ်ဆေးပါ။
ဒီအချိန်က major landscape အပြောင်းအလဲနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် မြက်ခင်းပြင် ကပြန်မစိမ်းလန်းတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါမျိုးတွေကို စိုးရိမ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုစိုးရိမ်နေ မယ့်အစား အမြန်ပြင်ဆင်ဖို့ကိုသာအာရုံထားပြီး ဓါတ်ပုံထဲမှာသင့်အိမ်က ကြည့်ကောင်းနေစေဖို့အတွက်သာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ပန်းပင်ကမကောင်းတော့တဲ့အပွင့်တွေကိုညှပ်ပစ်တာနဲ့ အပင်ကကြွေကျလာတဲ့သစ်ရွက် တွေကိုဝင်ပေါက်နဲ့အဝေးဆုံးကိုလှည်းထုတ်တာတွေပြုလုပ်ပြီး ရှုပ်ပွနေတဲ့အရာတွေကိုခြံပြင်ကိုရှင်းထုတ်ပါ။ ပြီး ရင်တော့ ပန်းအိုးထဲကပန်းပင်ရဲ့အပွင့်အဖူးလေးတွေကို လှပသွားအောင်ပြုပြင်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ခြံဝန်းလေးကကြည့်ကောင်းနေတော့မှာသေချာပါတယ်။ သင့်အိမ်ကိုလမ်းမပေါ်ကနေရိုက်ဖို့ ဓါတ်ပုံဆရာကအ ဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ကားကို အိမ်ရဲ့အရှေ့မှာထားခဲ့ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှသာသင့်အိမ်ရဲ့မြင်ကွင်းကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းမြင်နိုင်မှာပါ။
လုံးခငျြးအိမျ သနျ့သနျ့ငှားမညျ 📍 ➖➖➖➖➖➖➖ 09 751 557 447 Code-...